Safiirka Yemen iyo madaxweynaha Puntland oo kula ku qaatay Garowe – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Safiirka Yemen iyo madaxweynaha Puntland oo kula ku qaatay Garowe
17th May 2015 A warsame Af Soomaali 0
Mareeg.com: Danjiraha dalka Yemen u fadhiya caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho, Mr. Mansur Cali Rayash Al-imrani ayaa maanta booqasho ku tegay xarrunta maamulka Punt;and ee Garowe.
Madaxweynaha Puntland, Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa xafiiskiisa ku qaabilay danjire, Mr. Mansur Cali Rayash Al-imrani, iyagoo qaatay kulan gaar ah.
Kullan gaar ah oo dhecmaray madaxweynaha maamulka Puntland iyo danjiraha Yemen ayaan wax badan laga sheegin waxyaabaha looga wada hadlay.
Gaas ayaa safiirka Yemen uga warbixiyey dedaalka ay Puntland ugu jirto soo dhaweynta iyo dejinta qaxtootiga ka imaanaya dalka Yemen oo ay ka socdaan dagaalo.
Waxaa uu sidoo kale Madaxweynuhu sheegay in Puntland dadaal dheeri ah ku bixinayso sidii loogu gurman lahaa dadka ka soo qaxaya dagaalada Yemen islamarkaana ay jiraan gudiyo u xilsaaran u gurmadida walaalaheena Yemen ee dhibaataysan.
Mr. Mansur Cali Rayash Al-imrani ayaa isna dhankiisa Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Gaas iyo dhammaan shacabka reer Puntland uga mahadceliyey sida ay ugu gurmadeen walaalahooda ay dhibaatadu ku habsatay.
Imaanshaha Safiirka ee Puntland ayaa ku soo aadaysa xili ay si xawli ah ku soconayaan qaxootiga ka imaanaya dalka Yemen ee soo gaaraya gudaha Puntland, kuwaasi oo ay shacabka reer Puntland u fidiyen gurmad kooban.
Madaxweynaha Burundi: Khatarta Alshabaab ayaan dagaal kula jiraa
Tababar 5 cisho soconayey oo loo xiray Guddiga Isku dhafka Ciidamadda Xoogga dalka